Al-shabab oo sheegay in 5 Askari oo AMISOM ah ku dileen qaraxii saaka – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAAl-shabab oo sheegay in 5 Askari oo AMISOM ah ku dileen qaraxii saaka
Xarakada Al-shabab ayaa sheegtay in shan ka mid ah Ciidamada AMISOM ay ku dileen Qarax saaka ka dhacay Waddada Warshadaha ee Magaalada Muqdisho.
Al-shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxa ayaa intaas ku daray in Gaariga Ciidanka AMISOM ee la qarxiyay uu ku bur buray weerarkaas,islamarkaana askarta dhimatay ay arkeen xubno ka tirsan Al-shabaab oo degaankaas ku sugnaa sida ay sheegeen.
Warka ka soo baxay Al-shabaab ayaa lagu sheegay in Ciidamada AMISOM ay galbinayeen saraakiil ajaanib ah oo la shaqeeya Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Todobaadk ka hor ayaa sidan oo kale Ciidanka AMISOM waxaa lagu qarxiyay Waddada Jeneraal Daa’uud Cabdulle Xirse oo ku dhacda Waddada Warashadaha.
Xubnaha Aqalka Sare oo maanta kulan ka yeelanaya Miisaaniyadda dowladda 2018-ka
44,862 total views, 1,812 views today
44,862 total views, 1,812 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
44,933 total views, 1,811 views today
44,933 total views, 1,811 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
44,946 total views, 1,810 views today
44,946 total views, 1,810 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
44,968 total views, 1,810 views today
44,968 total views, 1,810 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,003 total views, 1,812 views today
45,003 total views, 1,812 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]